Madaxweyne Xaaf oo Sheegay in ay bilaabayan howlo lagu dhisayo Goobaha uu ku shaqeynayo Maamulka. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAMadaxweyne Xaaf oo Sheegay in ay bilaabayan howlo lagu dhisayo Goobaha uu ku shaqeynayo Maamulka.
Madaxweyne Xaaf oo Sheegay in ay bilaabayan howlo lagu dhisayo Goobaha uu ku shaqeynayo Maamulka.
Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya uu kala hadlay sidii loo dadajin lahaa dhismaha goobaha uu ku shaqeynayo Maamulka Galmudug.
Goobaha howlshaan laga qabanayo ayuu sheegay in ay kamid yihiin Magaalooyinka Dhuusamareeb, Cadaado, Gaalkacyo, Caabudwaaq iyo Magaalooyin kale oo ay kamid yihiin kuwa ay Maamulaan Al-Shabaab.
Xaaf ayaa qeybaha kala duwan ee Bulshada ugu baaqay in ay isku howlaan sidii ka qeyb qaadashada bilic soo celinta Magaalooyinka ku jira Gacanta Maamulkaasi.
Waxa uu soo hadal qaaday Dekeda Hobyo iyo Dhismaha Wadooyinka Burbursan oo uu sheegay in ay diiradda Saari doonaan, maadaama wadooyinka isku xira Magaalooyinka Galmudug aanan dib u dayactir helin tan iyo bur-burkii.
Dhanka Dekeda waxa uu tilmaamay in adeegsigeeda Bulshada Galmudug ay muhiim u tahay, waxa uuna tibaaxay in ay qeyb ka qaadaneyso kobaca dhaqaalaha Galmudug iyo isku socodka Ganacsiga.
Madaxweynaha Soomaaliya oo safar dhowr todobaaad ah ku tagay Deegaanada Galmudug ayaa dhagax dhigay Dekeda Hobyo, isagoona ballan qaaday ka qeyb qaashada Dowladda Madaxweynaha uu ka yahay Hormarinta Deegaanada Galmudug.
Sh.Xuseen “Dhismaha Garoonka Jalalaqsi waxa uu ka saarayaa go’doonka”
Mareykanka oo sheegay in uu dilay xubno ka mid ah AL-shabaab
53,937 total views, 1,824 views today
53,937 total views, 1,824 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
54,006 total views, 1,823 views today
54,006 total views, 1,823 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
54,017 total views, 1,823 views today
54,017 total views, 1,823 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
54,037 total views, 1,822 views today
54,037 total views, 1,822 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
54,079 total views, 1,826 views today
54,079 total views, 1,826 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]